Kugonesa Kwekutengesa: Kuvhara Gap Pakati Pekutengesa uye Kushambadzira
Kuvhara Gap Pakati Pekutengesa uye Kushambadzira
Muvhuro, March 4, 2013 Chipiri, Kurume 5, 2013 Jenn Lisak Golding
Musoro we kuchinja yekutengesa fanera iri mundangariro dzekambani yega yega. Chikamu chikuru chekuchinja ndechekuti isu tinotarisa sei kutengesa, uye zvakanyanya kukosha, marongero ekutengesa nekutengesa zvakanyatsoenderana kupfuura nakare kose. Masangano anofanirwa kuongorora kuti sangano ravo rinosvika sei pakutengesa nguva dzose kuitira kuti vasarasikirwe nemikana. Iko shanduko dzako kubva kushambadziro kuenda kukutengesa dzakashama? Uri kugovera ruzivo rwakakwana kune ese mapato? Uri kutarisa tarisiro chaiyo here? Iyi mibvunzo iwe yaunofanirwa kunge uchibvunza nguva dzose.
Kugonesa kwekutengesa, mumaonero angu, kunounza zvikwata zviviri (kutengesa uye kushambadzira) pamwechete. Iyo inogadzira hukama hwekufananidza, uko kubudirira kweumwe kunotsamira pane imwe uye zvinopesana. Nekuda kweizvozvo, zvikwata izvi zviri kuve zvakabatanidzwa uye zviri kugadzira mafafurefomu ayo anofambisa mawoffoff nekuchengetedza vatengi.
Vatengi vedu kuTinderBox vakashanda nemasangano akasiyana siyana nekupa vatengi ne sales proposal manejimendi software. Zvirongwa zvekutengesa chikamu chakakosha chemaitiro ekutengesa, asi vanozivawo kuti kudyidzana musati mutengesi asvika padanho rekutsvaga kwakamisikidza hukama hwehukama huchienderera mberi. Kunyatsoteerera kune vatengi uye kuunganidza data kubva kushambadziro kunokubatsira iwe kwete chete kusvika kune iyo yekutsika nhanho, asi iyo ichakubatsira iwe kugadzira yakapfuma midhiya chikumbiro iyo inokwezva kune iyo tarisiro izvo zvido uye zvido.
Takashanda pamwe nechikwata kuTinderBox kuti tiite tsvakiridzo yakatenderedza kugonesesa kwekutengesa uye kuti kubuda kuri kuchinja mutambo. Iwe unonzwa here mamwe eaya marwadzo ekutengesa? Ndedzipi shanduko dzauri kuita musangano rako kuenzanisa kutengesa uye kushambadzira?
Tags: kutauriranaMarketingKugonesa KugonesaZvirongwa Zvekutengesa